Amanqaku kaJason Oakley Martech Zone |
Amanqaku ngu UJason Oakley
Ndizama ukukunika imali yam- kutheni uyenza nzima kangaka? Le yimvakalelo eqhelekileyo kubathengi abaninzi be-B2B. Ngu-2020- kutheni sisaqhubeka sichitha abathengi (kunye nelethu) ixesha kunye neenkqubo ezininzi zakudala? Iintlanganiso kufuneka zithathe imizuzwana ukubhukisha, hayi iintsuku. Iminyhadala kufuneka ibe yeencoko ezinentsingiselo, hayi iintloko zentloko. Ii-imeyile kufuneka ziphendulwe ngemizuzu, zingalahleki kwibhokisi yakho engenayo. Lonke unxibelelwano kunye